Akụkọ - klaasị mbụ nchebe gburugburu ebe obibi ngwa agha mmepụta ahịrị!
Kpọọ anyị: 0086-371-56659866
Ngwakọta arụmọrụ dị elu
Osisi Ngwakọta Ngwakọta Akọrọ
Ngwa ngwa ngwa na-arụ ọrụ
Onye na-anakọta uzuzu
klaasị mbụ nchebe gburugburu ebe obibi ngwa agha mmepụta ahịrị!
Ngwa ngwa gypsum bụ ụdị mgbidi dị n'ime ụlọ na ihe nkedo ụlọ nke nwere nchebe gburugburu ebe obibi ndụ ndụ, arụmọrụ dị elu, nchekwa ike na ihe owuwu dị mma. Ọ nwere uru nke ịdị arọ dị arọ, ike dị elu, mgbochi ọkụ, ụda ụda, nkwụsịtụ, enweghị mgbawa, mkpuchi okpomọkụ, ọrụ iku ume (ikuku ikuku dị n'ime ụlọ nwere ike gbanwee), adịghị egbu egbu, enweghị ụtọ, enweghị redio, ihe owuwu dị mfe, obere ihe. n'ala ash, ngwa ngwa na-arụ ọrụ na mma arụmọrụ, Ọ bụ ihe ọzọ na omenala ciment ngwa agha. A na-eji plasta ciment mee ihe n'ime mgbidi ime ụlọ ruo ogologo oge, nke nwere ntụpọ dị ka nkwụsị dị mfe, oghere, ike ngwa ngwa na ogologo oge ịchọ mma. Karịsịa, ihe mgbawa na ịdapụ n'elu bọọdụ kọmnta gbasasịrị dị njọ nke ukwuu. E kpochapụrụ ngwa ngwa ciment dị ka ihe nkedo na mba ndị mepere emepe na mba ọzọ. Gypsum omenala nwere uru nke nkwụsị mmiri, ọnụ ahịa dị elu na obere oge ọrụ. Gypsum plasta na-emepụta site na nkà na ụzụ dị n'otu nwere ike dị elu, ezigbo mmiri na-eguzogide, ike siri ike, ogologo oge ọrụ na ọnụ ala.
Wuxi Jiangjia si mmepụta technology, usoro na mmepụta akara ngwá nwere elu mmepụta arụmọrụ, obere n'ala ebe, elu ogo automation, zuru ezu mmepụta ahịrị ngwá nkọwa, na kwa afọ mmepụta ike nke 50000-200000 tọn dị ka onye ọrụ mkpa. Ngwa ahụ bụ nri, nchekwa, metering na njem njem, ihe mgbakwunye, nkwakọ ngwaahịa agwakọta, nchịkọta uzuzu na njikwa. Ọ bụ PLC na-achịkwa ya ma na-arụkwa ya site na ihuenyo mmetụ aka, yana nnukwu akpaaka.
Nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, njikọ nwere ọgụgụ isi, ike dị elu na nke dị ala, ntinye ego dị ala. Na n'ezie mmepụta na ọrụ nke akọrọ ntụ ntụ ngwa agha mmepụta ụlọ ọrụ, nkezi nke akụrụngwa itinye ego na ngụkọta ego na-adịghị nnukwu, ma ọ bụrụ na ngwá adịghị mma, ọ ga-kpọmkwem na-emetụta nkịtị mmepụta na ngwaahịa àgwà. N'ime ọtụtụ afọ nke ahụmịhe bara ụba na ọtụtụ narị ikpe bara uru, igwe Tongding nwere ahịrị mmepụta ngwa agha dị iche iche dịka ọnọdụ ndị ahịa si dị. Na-adabere na ihe ndị tozuru okè na nkà na ụzụ nhazi, ọnụ ọgụgụ ọdịda dị ala, a na-edozi nkọwa usoro mmepụta ihe, na nhazi zuru ezu dị nro.
Oge nzipu: Ọktoba 29-2021
Nkọwa ọrụ ọzọ biko zitere anyị email, anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.ajuju
Ziga ozi na ndị na-ebubata ya
Adreesị: No.93 Zizhu Road, High-Tech Mpaghara, Zhengzhou City, Henan Province, China